Ny New ABC an'ny antsinjarany: Mifandraisa foana | Martech Zone
Alatsinainy, 6 Jona, 2016 Douglas Karr
Ny fivarotana fivarotana biriky sy mortara dia mbola mitondra hery mividy be dia be any amin'ny fivarotany ihany koa - ary tsy ho afaka io tsy ho ela. Saingy miova ny fihetsika, mitaky ny paikadin'ny varotra anatiny ao anaty magazay mba hananganana fifandraisana sy traikefa tsara kokoa amin'ny mpanjifany mba hiverenan'izy ireo hiverina.
Ity infographic avy amin'ny DirectBuy ity dia fijery mangarahara amin'ny fanamby ataon'izy ireo manokana, ny fiovan'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa, ary ny paikady vaovao apetrak'izy ireo. Angamba ny tiako indrindra dia ny ABC vaovao… tsia Mikatona foana, izany Mifandraisa foana!
Ny tetika fivarotana mafy fototra dia lavo eny amoron-dàlana ho an'ny fifandraisana misy ifandraisan'ny mpampiasa sy ny serivisy. Mampiasa vola amin'ny tombony virtoaly izahay mba hahafahan'ny mpikambana mahazo ny vidiny sy serivisy tsara indrindra nefa tsy miala ao an-trano mihitsy. DirectBuy
Ny fiantsenana an-tserasera dia tsy fanoloran-tena fotsiny fa manome tombony hafa iray taonina:
Ora fivarotana - Afaka miantsena isaky ny maniry amin'ny Internet ny mpanjifa.
Competitive Pricing - Ny fifaninanana manerana ny Internet dia mampihena ny vidin'ny mpifaninana.
Speed - Tsy miandry andalana… haingana kokoa ny fiantsenana amin'ny Internet.
fanatitra - Ny fisian'ny, ny isan-karazany ary ny fampitahana dia ambony noho ny Internet avokoa.
Mbola maro ny olona miantsena any amin'ny magazay noho ny antony maro… hijerena sy hikasika ilay vokatra, ny fampiononana ny fivarotana, ny fankasitrahana ny mpiasa, ary ny fahafahan'izy ireo mamerina entana mora foana. Ny fampifanarahana ny fahamoran'ny Internet miaraka amin'ny traikefa tsara ao amin'ny magazay dia manatsara ny fahafahan'ny mpivarotra mahazo fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny fivarotana rehefa mitondra fiovam-po amin'ny Internet ihany koa.
Tsy azonao atao ny mampitovy ny zavatra niainan'ny mpanjifa amin'ny chat na antso an-tariby miaraka amin'ny fotoana mety ananan'olona. Ny fananganana fifandraisana dia tokony ho lohalaharana amin'ny biriky sy ny feta rehetra.
Tags: mifandray foanadirectbuytaratrafmfiantsenana findayonline shoppingantsinjaranytraikefa fiantsenanatraikefa amin'ny fivarotana
12 Jul 2016 amin'ny 10:57 PM
Misaotra amin'ny fampahalalana. Tamin'ny fampiharana nataoko dia nolazaiko fa, ny hevitra tsara na pejy tsara amin'ny facebook, dia afaka manosika ny olona hividy smth. Fa ny hevitra ratsy indrindra dia ny mifantoka amin'ny SMM na koa tsy miraharaha ny SEO ny ecommerce.